I-Casa Luna e-Playa las Tortugas - I-Airbnb
I-Casa Luna e-Playa las Tortugas
Playa las Tortugas, Nayarit, i-Mexico
U-Joseph uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
I-Casa Luna iyi-villa ekhanya kakhulu futhi enethezekile. Amamayela ayisithupha olwandle oluyimfihlo; ikamu lokongiwa kofudu endaweni ukuze ujabulele; ichibi lomphakathi elikhulu elinendawo yezingane kanye nomthunzi. Igrill yegesi endaweni ephezulu ene-palapa netafula nezihlalo. Ukubuka okuhle kolwandle!
Amabhodi we-Boogie ozowasebenzisa.
Inkonzo yasendlini zonke izinsuku. Ayikho isevisi ngeSonto. ++
++Ngesikhathi sobhadane lwe-Covid 19, izinsiza zasendlini zingashintsha ngenxa yokuqhelelana komphakathi.
I-Casa Luna iyikamelo lokulala eli-2, i-villa engu-2.5 etholakala e-Playa las Tortugas exotic. Ukubuka okuthandekayo kolwandle kusukela kuzinga lesi-2 nelesi-3, nokho izinyathelo ukusuka ogwini. Sitholakala kumakhilomitha angama-70 enyakatho yePuerto Vallarta, endaweni enesango. U-Marianne angakuhlelela ezokuthutha.
Indawo yokuphumula eco-friendly enenkambu yokulondoloza ufudu echumayo. Ichibi lokubhukuda, izingadi ezinhle, nokunye okuhamba phambili kwezinyoni emhlabeni! Amamayela amahlanu olwandle olungenamuntu, alungele ukubhukuda nokuntweza emanzini. I-villa ehlome ngokuphelele enompheki ozimele kanye nemisebenzi yekhwalithi yokubhuka etholakalayo. I-kayak yolwandle, inhlanzi, iwashi lomkhomo noma vele uphumule. Indawo ekahle yeholide lakho lomshado noma iholide lomndeni/lomngane. Ezokuthutha ziyatholakala kusukela ePuerto Vallarta. I-Casa Luna iyindlu yokulala engu-2, i-villa yokugezela engu-2.5 etholakala ePlaya las Tortugas. Ukubuka okuthandekayo kolwandle kusukela kuzinga lesi-2 nelesi-3, nokho izinyathelo ukusuka ogwini. Izinga lokungena e-Casa Luna linamakamelo okulala amabili amakhulu anezindawo zokugeza ezigcwele. Kunamayunithi a/c ekamelweni ngalinye. Phakamisa izitebhisi ezifakwe amathayela ukuze uvule ikhishi negumbi lokudlela. Igumbi lokuhlala elinezindawo zokulala ezengeziwe ezimbili. Isibuko esihle esinamagobolondo kubhavu ohhafu. I-tilevera yaseMexico yonke indawo. Ikhishi elifakwe ngokugcwele, noma inketho yompheki womuntu siqu. Imisebenzi eminingi ongakhetha kuyo. Gibela amahhashi ogwini lolwandle, i-kayak yolwandle, inhlanzi, ukuntweza, noma phumula futhi ujabulele isiphuzo sakho esiyintandokazi kumpheme we-palapa ophahleni. Cela u-Edgar ukuthi ahlele imisebenzi yakho.
Indawo yokungcebeleka evumelana nemvelo enekamu lokonga ufudu lwasolwandle olukhiqiza kakhulu e-Mexico. Ichibi lokubhukuda, izingadi ezinhle, nokunye okuhamba phambili kwezinyoni emhlabeni! Amamayela amahlanu olwandle olungenamuntu, alungele ukubhukuda nokuntweza emanzini. Sinamahektare ezingadi okufanele sizihlole. Bhukuda noma isikebhe unqamule i-estuary uye ezindaweni zokudlela zesitayela se-palapa ezingaphambi kolwandle ezinezimfanzi ezintsha, inhlanzi, njll. Indawo ekahle kakhulu yeholide lakho lomshado noma iholidi lomndeni/lomngane.
I-Playa las Tortugas iphumile endleleni, kodwa ngeke ufune ukuhamba uma usufikile. Jabulela ubuhle bebhishi elihlanzekile ngaphandle kwabathengisi noma izinkathazo.
My wife and I live in Truckee, CA. We met in Mexico 37 years ago and looked for many years to find the perfect place to buy. We found it in Casa Luna at Playa las Tortugas!
U-Edgar uzoba khona nsuku zonke. Ngiyafinyeleleka nge-imeyili noma ngocingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Playa las Tortugas namaphethelo